सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढायो, कति प्रतिशत बढ्यो ? – Sandesh Press
June 28, 2021 156
सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढायो, कति प्रतिशत बढ्यो ? सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजनबारेको अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रतिवेदनले वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्दा भाडा बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको औंल्याएको छ ।
विगतमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन नभएपनि तेलको मूल्यमा भएको घटबढका आधारमा पटक-पटक भाडा समायोजन भएकाले अब कसरी भाडा समायोजन गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए ।सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढायो, कति प्रतिशत बढ्यो ? सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक भाडा समायोजनबारेको अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रतिवेदनले वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्दा भाडा बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको औंल्याएको छ ।
Nextभोलि बाट सार्वजनिक यातायात भने यसरी खुल्ने, निषेधाज्ञा थप्ने भन्ने बारे आयो यस्तो जानकारी, पढ्नुहोस् थप समाचार